Fiarovana - AOOD Technology Limited
Ny rafitra fiarovana maoderina dia mitombo hatrany amin'ny fangatahana indostrialy, ara-barotra sy ara-tafika toy ny fiarovana ara-barotra sy fotodrafitrasa, fiarovana ny fitaterana sy fahitana amin'ny alina, sambo fialamboly, fanaraha-maso ny afo, fanaraha-maso sy fikarohana ary fanarahan-dia. Mba hahatratrarana ny fanaraha-maso sy ny tanjona kendrena ary ny tanjona amin'ny fanarahana dia mila haorina ny rafitra video mifanaraka aminy mba hamokarana sary na firaketana. Eo afovoan'ireo rafi-dahatsary be pitsiny ireo, ny herinaratra, ny fambara ary ny angon-drakitra rehetra dia ampitaina amin'ny alàlan'ny rafitry ny peratra slip. Manolotra fandefasana sary 360 ° tsy misy fiafarana sary marobe na firaketana an-tsoratra avy amin'ny faritra rotary mankany amin'ny faritra raikitra ary hialana ny tariby miolakolaka rehefa mihodina. Izany no antony mahatonga ny rafi-dahatsary modem ho fampiharana fangatahana lehibe indrindra amin'ny peratra slip.
Vokatra mifandraika: Capsule slip slip, Peratra fitetezana avo lenta, Ethernet Slip Rings